Jereo ny antsipirian'ny seranam-piaramanidina Copenhagen | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | seranam-piaramanidina, Copenhague, General
Copenhagen dia renivohitra Danoa ary iray amin'ireo tanàna eropeana manandanja indrindra. Ity tanàna tsara tarehy ity dia mandray mpitsidika an-jatony amin'ny seranam-piaramanidiny isam-bolana ary noho io antony io dia mahaliana tokoa izany. Raha iray amin'ireo fitsidihanao manaraka ity dia raiso ny fanamarihana momba ny tanàna sy ny seranam-piaramanidina.
Raha mandeha mankany amin'ity tanàna ity dia tsara kokoa ny manazava ny fampahalalana momba ny seranam-piaramanidinao, teboka fahatongavana sy fiaingana handalovan'olona an'arivony. Ho fanampin'izany, dia hahita toerana sasantsasany izay mahaliana ny tanàna afaka manana làlana fitsidihana isika.
1 Fitsidihana tanàna any Copenhagen
2 Seranam-piaramanidina any Copenhagen
3 Seranam-piaramanidina Kastrup
4 Seranam-piaramanidina Roskilde
Fitsidihana tanàna any Copenhagen
Ny tanànan'i Copenhagen dia a tanàna lehibe izay misy teboka mahaliana maro. Ny New Port na Nyhavn, izay lakandrano malaza indrindra eto an-tanàna, izay naorina tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Ny sary sokitra Little Mermaid, miorina amin'ny angano nosoratan'i Hans Christian Andersen, dia nanjary iray amin'ireo tandindon'ny tanàna. Tokony hitsidika ny tanàna mahaleo tena Christiania, izay heverina ivelan'ny Danemarka koa ianao. Rosenborg Castle dia lapa tsara tarehy tamin'ny taonjato faha-XNUMX misy zaridaina tsara tarehy ary ao ihany koa ny fiangonan'i San Salvador. Raha te hiala voly isika dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny Tivoli Gardens, miaraka amin'ny iray amin'ireo voly fialamboly tranainy indrindra eto an-tany.
Seranam-piaramanidina any Copenhagen
Akaikin'ny tanàna dia azo atao ny manatona seranam-piaramanidina roa manompo an'io faritra io. Amin'ny lafiny iray dia manana ny seranam-piaramanidina Kastrup, izay iray amin'ireo lehibe indrindra any Eropa, manompo a faritra lehibe any avaratr'i Eropa. Etsy ankilany, nisy iray vao haingana noforonina, ny an'i Roskilde, izay manampy amin'ny fampihenana ny enta-mavesatry ny seranam-piaramanidina lehibe eto an-tanàna. Ireto ny roa azo atao rehefa manidina ho any Copenhagen.
Kastrup Airport dia ny manan-danja indrindra amin'ny Danemarka rehetra ary iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny resaka fifamoivoizana amin'ny faritra avaratry Eropa manontolo. Io ihany koa no tranainy indrindra ao an-tanàna, izay notokanana tamin'ny 1925. Ao amin'ny seranam-piara-manidina dia misy terminal telo, izay ampifandraisin'ny serivisy fitateram-bisy hanamorana ny mpandeha hifindra. Maimaimpoana ity serivisy ity, hahafahantsika mifindra amin'ny toerana iray amin'ny toerana hafa tsy andoavany vola.
Io seranam-piaramanidina io dia miasa miaraka amin'ny orinasa Rafitra fiaramanidina Scandinavian. Na izany aza, misy orinasa maro hafa toa an'i Lufthansa, Finnair na Danishair. Manana tanjona iraisam-pirenena maro any amin'ny toerana toa an'i Canada na Etazonia. Izy ireo koa dia manana toerana maro karazana Eropa, toa an'i Berlin, Viena na Helsinki, ankoatry ny maro hafa.
Hita io miorina amin'ny nosy Amager, 8 kilometatra monja avy eo afovoan-tanàna. Ity nosy ity dia mifandray amin'ny afovoan'i Copenhagen amin'ny alàlan'ny tetezana, izay manamora ny fankanesana any afovoany avy amin'ny seranam-piaramanidina. Ny seranam-piaramanidina dia notokanana tamina terminal tamin'ny 1925, izay iray amin'ireo seranam-piaramanidina tsy miankina voalohany any Eropa. Efa nisoratra anarana hetsika 6.000 tamin'ny 1932. Tamin'ny taona enim-polo dia notokanana ny terminal faharoa ary tamin'ny taona valopolo dia noforonina ny fijanonan'ny fiara. Efa tamin'ny taona 98 no nitokanana ny terminal fahatelo, nahazo ireo telo izay misy ankehitriny.
Ity seranam-piaramanidina ity dia manana fitaovana isan-karazany izay manampy ireo mpandeha mandany ora maro any. Izy io dia manana trano fisakafoanana sy kafe fisakafoanana haingana afaka mihinana amin'ny terminal. Izy io koa dia manana birao sy efitrano fivoriana na fihaonambe ho an'ireo mandeha amin'ny asa aman-draharaha. Ao amin'ny seranam-piaramanidina iray ihany dia misy trano fandraisam-bahiny, ny Hotel Transfer, izay misy fidirana mivantana amin'ireo terminal ary mety ho toerana tsara handaniana ny alina raha misy fijanonana any amin'ny seranam-piaramanidina. Toy izany koa, ny mpandeha dia ho afaka mahita fivarotana, toerana fampahalalana ary fanofana fiara. Ao amin'ireo fotodrafitrasa dia afaka mahita ATM ianao ary manana fidirana Internet Wi-Fi ihany koa.
Afaka mankany amin'ity seranam-piaramanidina ity mampiasa fomba fitaterana isan-karazany. Avy amin'ny terminal dia afaka mandray bus maromaro ianao, toy ny isa 5A, izay mankany afovoan-tanàna. Azo atao ihany koa ny misambotra lamasinina amin'ny terminal 3, misafidy ny tapakila arakaraka ny faritry ny tanàna halehanao. Misy ihany koa ny mety mandeha amin'ny metro. Safidy hafa ny manofa fiara na mandeha taxi, na dia ny bus na ny metro aza no safidy mora indrindra amin'ny rehetra.
Ity seranana ity dia misy fito kilometatra miala an'i Roskilde. Antsasak'adiny avy eo afovoany izy io ary seranam-piaramanidina kely kokoa sy vao haingana kokoa. Amin'izao fotoana izao dia ny asany lehibe indrindra dia ny sidina eo an-toerana, fiarakaretsaka an'habakabaka na ny toerana anaovana fanao sidina, na dia eo aza ny fandinihana ny fahafaha-manolotra azy amin'ny sidina mora na ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Seranam-piaramanidina Copenhagen
Valan-javaboary El Teide
Ayamonte, eo am-poton'ny ony